• Maintenance Maimaim-poana • Gel
Ny batterie VRLA GEL mahazatra CSPOWER dia natao ho an'ny fiampangana sy famotsorana matetika ao anatin'ny tontolo tafahoatra.Amin'ny fampifangaroana ny electrolyte Nano Silicone Gel vao novolavolaina miaraka amin'ny pasteur avo lenta, ny faritra Solar dia manome fahombiazana amin'ny famerenam-bola avo lenta amin'ny charging ambany dia ambany.Ny stratification asidra dia mihena be amin'ny fampidirana Nano Gel.
Fahaiza-manao: 12V33Ah ~ 12V250Ah
Namboarina mitsingevana fiainana fanompoana: 12 ~ 15 taona @ 25 °C/77 °F.
> Famintinana ny bateria gel maharitra ela
> Ny endri-javatra sy ny tombony ho an'ny bateria gel solar
Noho ny teknolojia 4BS lead paste, ny bateria vrla gel dia manome fiainana maharitra maharitra.
Vita tanteraka avy amin'ny akora madio avo lenta, ny bateria gel CSPOWER VRLA dia tena ambany dia ambany.
Ny batterie gel dia manana teknolojia famehezana azo antoka izay ahafahan'ny tombo-kase fiarovana.
> Fanamboarana batterie VRLA GEL
1) Container / Cover: Vita amin'ny UL94HB sy UL 94-0ABS Plastic, fanoherana ny afo ary ny rano.
2) 99.997% firaka vaovao madio TSY MISY mampiasa firaka fanodinana.
3) Lovia ratsy: Ampiasao ny grids firaka PbCa manokana, manatsara ny fahombiazan'ny recombination ary tsy dia misy entona.
4) High quality AGM separator: Absord asidra electrolyte, tsara indrindra retainer tsihy ho VRLA bateria.
5) takelaka tsara: Ny grids PbCa dia manamaivana ny harafesina ary manalava ny androm-piainany.
6) Terminal post: Varahina na firaka fitaovana miaraka amin'ny conductivity ambony indrindra, manatsara ny avo ankehitriny haingana.
7) Vent Valve: mamela ny famoahana ny entona tafahoatra ho azy ho fiarovana.
8) Dingana telo amin'ny fomba fanaovana tombo-kase: Ataovy azo antoka fa voaisy tombo-kase tanteraka ny bateria, tsy misy leakage sy asidra mivaingana, fiainana lava kokoa.
9) Silicone Nano GEL electrolyte: Import avy any Alemaina Evonik silicone marika malaza.
> Fametrahana voltase sy fikandrana
Fiara mandeha amin'ny herinaratra, fiara golf sy buggies, seza misy kodiarana, fitaovana herinaratra, kilalao herinaratra, rafitra fanaraha-maso, fitaovana ara-pitsaboana, rafitra UPS, masoandro sy rivotra, vonjy maika, fiarovana, sns.
teo aloha: LifePO4 Relpace SLA Battery
Manaraka: CH High Discharge Agm Battery
12V Valve mifehy ny fikojakojana ny bateria Gel maimaim-poana
Batterie tsy misy fikojakojana Batterie cellule solaire Paneau solaire misy bateria ho an'ny trano Batterie tsara indrindra ho an'ny rafimasoandro Battery Ups ho an'ny solosaina Batterie 12v 7ah azo averina